Daryeelka Guryaha ee Dijital ah: Sida Loo Suuq Geeyo Hantidaada Kadib-COVID Hantida Soo Noqoshada habboon | Martech Zone
Sidii la filayay, fursadda suuqa kadib-COVID way is bedeshay. Ilaa iyo hada waxay umuuqataa inay cadahay in loo wareejiyay dhanka milkiilayaasha guryaha iyo maalgashadayaasha guryaha. Maaddaama baahida loo qabo joogitaannada muddada-gaaban iyo is-waafajinta dabacsan ay sii kordheyso, qof kasta oo cinwaan leh-ha noqdo guri fasax buuxa ah ama qol jiif ah oo dheeri ah-ayaa si wanaagsan loo dejiyey si looga faa'iideysto isbeddellada. Marka ay timaado dalabka kirada muddada-gaaban, wax gebi ahaanba dhammaad malaha.
Dheeraad ah, ma jirto sahayda arag. Agaasimaha guud ee Airbnb, Brian Chesky, ayaa ku dhawaaqay taas qiyaastii 1 milyan oo marti ayaa loo baahan lahaa si loo buuxiyo baahida suuqa. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay guryaha guryaha badan, qayb ka mid ah 65% guryaha Airbnb ayaa iska leh. Dhismayaasha qoysaska badan leh oo leh 40 albaab ama wax ka yar ayaa soo arkay qaar ka mid ah soo-celinta ugufiican ilaa hadda.
Khatar yar iyo abaalmarin sare ayaa sugeysa milkiile kasta oo guryo ah, ha ahaato guriga, hawlgalka gacanta ama miisaan buuxa, faylalka tacliimeed ee badan. Laakiin si kastaba xaalku ha ahaadee, xogta, suuq-geynta, iyo otomaatiguba waa saaxiibka ugu fiican milkiilaha. Farsamooyinkii hore ee suuqgeynta ayaa seegi doona isbeddelka dalabka, iyo ku guuldarraysiga ah in otomatiga loo maro hawsha wareejinta xoogga-gaar ahaan kirooyinka muddada-gaaban-waxay ka dhigi kartaa maal-gashiga guryaha dhismaha koonfurta. Qorshaynta saxda ah, diyaarinta, iyo maalgashiyo yar oo la maareyn karo, milkiileyaasha guryaha waxay dareemi karaan kalsooni inay si fiican u dejiyeen kirada ay u leeyihiin guusha post-COVID.
COVID-19 wuxuu ahaa dhibaato caalami ah; waa saameyn iyo isbeddelada aragtida ayaa ah mid caalami ah. Taas macnaheedu waa inta badan martida post-COVID waxay raadinayaan waxyaabo isku mid ah, iyo talaabada ugu horeysa ee martigeliye kasta ayaa hubin doonta in waxyaabahaasi ay yihiin kuwo hagaagsan. Liisaska waa inay xayeysiiyaan borotokool nadaafad leh oo u dhexeeya martida, iyo istiraatiijiyado fayadhowr oo ku dhex jira martida. Marti-geliyeyaasha doorta nidaamka nadiifinta ee shan-tallaabada ah ee Airbnb waxay si gaar ah ugu muujinayaan liistadooda, taas oo ka tarjumeysa rabitaanka kireystayaasha inay yeeshaan muuqaalka noocaas ah. Shaqada guriga ayaa ahaan jirtay wax daaha gadaashiisa ka socda; hadda, martida waxay rabaan inay arkaan xalalka caafimaadka iyo badbaadada si loo aamino badbaadada hantida.
Marti-galiyayaashu waa inay sidoo kale maanka ku hayaan waxyaabaha ka-shaqeeya guriga-guriga markay xayeysiinayaan liisaskooda. Muddo bilo ah, internet-ka wireless-ka ayaa ka mid ahaa waxyaabaha loogu doonista badan yahay dadka safarka ah. Airbnb waxay sii deysay daraasad muujisay dadka martida loo yahay ee ku daraya saldhigga shaqada ee laptop-ka saaxiibtinimo ka shaqeeya ay 14% ka badan yihiin kuwa dhiggooda ah. Sawirro tayo sare leh oo leh goob shaqo oo waasac ah - laga yaabee kafee dhameystiraya, madbacad, awoodaha xawaaraha sare ee internetka - ayaa soo jiidan doona mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan COVID-era demographics: shaqada-meel kasta oo laga kireysto.
Liisaska isku midka ah - The More The Merrier
Isbeddelku wuxuu ahaa mid joogto ah suuqa ka dib COVID. Halkii ay isku dayi lahaayeen in ay waqti siiyaan suuqa oo ay u adkaystaan ​​mala-awaalka helitaanka qiimaha saxda ah, milkiilayaasha guryaha ayaa samayn kara hal maalgashi oo caqli-gal ah si loo ciribtiro madax-xanuunka suuqgeynta. Suuqgeynta otomaatigga ah waxay ka dhigeysaa qiime jaban mid fudud. Maalgashadayaasha iyo milkiileyaashu waxay maalgashan karaan tikniyoolajiyad sahamin doonta baahida suuqa waxayna ku qori doonaan hantida heerka qiimaha ku habboon iyo dhererka joogitaanka. Waxay beddeli kartaa labada ikhtiyaar midkood, iyagoo ka codsanaya marti badan oo leh baahiyo kala duwan illaa muddada ama miisaaniyadda. Waxa kale oo ay ku qori kartaa isla hantida degmooyin badan oo kiro ah oo muddo gaaban ah, oo mid kastaaba keeno dhagaystayaal kala duwan
Iyo nidaam suuq geyn otomaatig ah oo meesha yaal, waxaa muhiim ah in milkiilayaasha iyo maalgashadayaashu ay ururiyaan xogta ku xeeran sida liis kasta u qabanayo. Xariirka milkiilaha wuxuu noqon karaa meel wanaagsan oo lagu dhejiyo nambarada muhiimka ah, la socoshada dakhliga, taariikhda ballansashada, kharashyada, iyo lacag bixinta hal meel. Maalgashadayaashu way fahmi karaan guusha istiraatiijiyadaha suuq geynta ee kala duwan, iyo inay la socdaan qiimaha iyo qaabka joogitaanka dhaadheer ee soo jiidanaaya inta badan iibkooda. Waxay awood u yeelan karaan lacag-bixinta lacagtooda, waxay hagaajin karaan xisaabintooda, waxayna la socon karaan xariiqdooda hoose iyagoo isla markaa uruurinaya jaangooyooyin muhiim ah: degganaan, dakhli bille ah, iwm.
Passivity-ka Bixi-Laga baxay
Maalgashadayaasha iyo milkiileyaashu waxay lumiyaan waqti iyo tamar maskaxeed markay isku dayaan inay u janjeeraan dhanka yar ee soo galka kiraystayaasha. Maareynta gacanta ee kirada muddada-gaaban ayaa si dhakhso leh isu geynaysa. Milkiilayaashu waxay xawilayaan hoos-dhigid, soo-galitaanka martida iyo xaqiijinta Aqoonsiga, lacag-bixinta, iyo nadiifinta inta u dhexeysa joogitaan kasta. Si dhakhso leh inta milkiile u qorsheeyo, walxahaas maareynta ahi waxay noqdaan shaqo waqti-buuxa ah, iyaga oo ka sii fogeynaya hadafka guud ee laga wada siman yahay: dejinta dakhliga dadban.
Milkiilayaashu waxay hal mar ku sameyn karaan maalgashi halbeeg maareynta hantida ah si ay uga caawiyaan inay maareeyaan dadaalkooda sababtana u siiyaan martidooda khibrad sare, gacmo-la'aan ah. Barnaamijyada casriga ah ee isku dhafan ayaa ka caawin kara martida iyada oo loo marayo baaritaanka Aqoonsiga dalwaddii, isla markaana u keenaya furaha marin-u-helka gacmo-la’aanta ah si ay ugu fududaato. Milkiilayaashu way ka faa'iideysan karaan iskaashi maamul inta lagu jiro hawsha wareejinta, sidoo kale. Waxay si otomaatig ah u qiimeyn karaan hantida nadaafadda iyo dayactirka, isla markaana waxay si otomaatig ah ugu wareejin karaan shaqooyinkaas loo soo bandhigo kooxaha guryaha ka shaqeeya iyo xirfadleyda dayactirka. Guryaha markaa si dabacsan ayaa loo shaqaaleysiin karaa iyadoo lagu saleynayo baahiyaha degdegga ah, u oggolaanaya milkiileyaasha inay noqdaan meel kasta oo adduunka ka mid ah marka wareejinta la sameynayo.
Hantida ugu fiican ee waxqabadka suuqa musiibada kadib waa dabacsanaan. Kirada muddada-gaaban ayaa ah tan ugu dhow ee maalgashade iman karo. Dadku waxay sahaminayaan deegaanno cusub oo qiimo jaban ku nool, u safraya isbeddel muuqaal oo aad loogu baahan yahay, ama ku tijaabinaya aagag cusub xorriyaddooda cusub ee xafiiska. Kirada muddada-gaaban waxaa loogu talagalay dhaqdhaqaaqaas musiibada kadib. Qof kasta oo haysta wax kiro ah - qol jiif ah garaashka ama guri casri ah oo fasax ah - wuxuu haystaa fursad aan caadi ahayn. Iyada oo la adeegsanayo suuq si otomaatig ah, u fidinta martida loogu talagalay, iyo istiraatiijiyado loogu talagalay maareynta hantida dadban, milkiile kasta ayaa si habboon loo dejin doonaa si uu uga qayb qaato qulqulka dahabka ee musiibada kadib.
Tags: Airbnbbin cheskyCOVID-19qalalaasaha adduunkamidabbo kala duwanmasiibomaaraynta hantidahantida maguurtadahantida maguurtada ah investemtnbarnaamijyada casriga ah
10 Xeeladaha Warbaahinta Bulshada ee Kordhiya Saamiyada iyo Beddelka